Ciidamadii Gadoodsanaa oo howlgal ka fuliyey Sh/Dhexe - Latest News Updates
Ciidamadii Gadoodsanaa oo howlgal ka fuliyey Sh/Dhexe
Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Hir-Shabelle ayaa xalay ilaa shalay waxa ay hawgal ka dhan ah Al-Shabaab ka sameeyeen degaano hoosyimaada degamada Balcad ee gobalka Shabeellaha Dhexe .
Deegaanada ay Ciidamada howlgalka ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah tuulada Xawaadley,Shalow ,Dhagaxoow iyo deegaano kale halkaas oo shalay gelinkii hore ay tageen Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Amniga Maamulka Hir-Shabeelle Geele Isaaq Warsame oo howlgalka markii uu soo idalaaday kadib Warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu yimid kadib markii Al-Shabaab ay tageen deegano iyo tuulooyin hoosyimaada degmada Balcad ee gobalka Shabeellaha dhexe .
Waxa uu sheegay in howlgalka ay iska kaashanayaan Ciidamada Booliska Maamulka Hir-Shabeelle iyo kuwa xooga dalka gaar ahaan Ciidamadii gadoodsanaa eek u sugnaa degmada Balcad,isla markaana ay tageen tuulooyinkii ay ku sugnaayeen Al-Shabaab wallow markii dambe ay Al-Shabaab isaga baxeen.
Waxa uu ugu baaqay shacabka kunool tuulooyinka ay howlgalka laga sameeyay in ay lashaqeeyaan Ciidamada ammaanka Soomaaliya,kuwaas oo mararka qaar howlgallo ka fuliya deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Shabeellaha dhexe.
Ciidamada Dowladda ayaa weli waxaa ay howlgallo ka wadaan tuulooyin hoostaga degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana wararka aan heleyno ay sheegayaan in ciidamadu ay dhaq dhaqaaqyo wadaan.